Ngomuntu omdala ubude buka-86 kuya ku-97 cm no-2,5 kg kuya ku-4 kg, iKapa Fox (Vulpus party), owaziwa nangokuthi i-Silver Fox, ungenye yezinhlobo ezincane kunazo zonke eNingizimu Afrika. Ziyizinhlobo ezivikelwe ukuthi, ngokusho koLuhlu Lwabomvu BaseNingizimu Afrika, eLesotho naseSwazini, ikakhulukazi ludla izwe elivulekile, njengendawo enotshani, utshani obunezihlahla ezihlakazekile kanye nezindawo eziluhlaza kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni ezomile zaseKaroo, iK Kalahari kanye iziphetho zehlane laseNamib.
Ziye zabhalwa ku-Kimberley Thorn Bushveld, i-Eastern Mixed Kama Karoo ne-Dry Sandy Highveld Grassland, kanye ne-fynbos biome eNtshonalanga Kapa, ​​enamazinga aphezulu okushisa nezimila ezinamandla. Bavame ukugwema izindawo ezilawulwa yi-Jackals emnyama (i-Canis mesomelas).
Bavame ukulingana ngokuphila, nabesilisa nabesilisa abenza izinhlangothi zombili entwasahlobo, kanti ama-pups abo azalwa cishe ngemva kwezinsuku ezingu-52, ekuqaleni kwehlobo, ngo-September ka-Novemba. Kodwa futhi beyaziwa ukuthi bazokhiqiza amalitha ngasekupheleni kukaDisemba. Ngenkathi zivame ukuba nomshini owodwa ngonyaka, kube khona izigameko lapho izilo ezimbili zirekhodwa ngonyaka.
Amatafula ngokuvamile ahlanganisa ama-pups amathathu kuya amane, abesilisa abahlinzeka abesifazane ngesikhathi samasonto amabili okuqala ngemva kokubeletha. Ama-pups aqala ukudlala ezinyangeni ezine ubudala futhi azimele ngesikhathi sinezinyanga ezinhlanu ubudala. Bavuthwa ngokocansi kusukela ezinyangeni ezingu-9 ubudala.
Indlela Yokuzingela Nokuzondla
Ngokuyinhloko zizohlwaya ebusuku, kodwa zisebenza kakhulu emahoreni wokukhanya kwelanga lokushisa. Ngokomqulu wePredation Management, bangatholakala bodwa noma ngababili, kodwa bazingela. Azikho izindawo eziningi, ngezindawo zokuzingela ezisuka kumakhilomitha angamakhilomitha amathathu kuya kwamashumi amathathu.
Kuyinto engavamile ukuba iCape Foxes ibangele ukulahlekelwa kwezimpahla, ngoba ikakhulukazi izidla ezilwaneni ezincane, njengezinambuzane, izinyoni, izilwane ezinwabuzelayo, ama-rodents kanye ne-carrion. Uma behlasela imfuyo, ngokuvamile amawundlu azalwa amasha angaba nezinsuku ezine ubudala. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, zizokwenza umuntu abulawe ngomcimbi ngamunye futhi avame ukuhamba nomphimbo noma ikhanda lezilwane. Amamaki ezinyosi amancane angashiywa entanyeni, ehlombe noma ehlathini lwesidumbu, kodwa ngeke kube khona amamaki okugaya futhi isidumbu asizange sikhishwe.
Lapho bedla, bavame ukuvula isikhala esincane emlonyeni wesilwane bese bedla kuphela inhliziyo, ubisi lwesisu (abomasum), umlenze ophansi onomlenze noma inhlanganisela yalezi zilwane. Ngezinye izikhathi izimbambo zezimbambo zidliwa, kepha akukho mathambo. Ngezikhathi ezingavamile, lapho iqembu lezimpungushe lidla isidumbu, amadokodo ayodliwa. Izimpungushe ngokuvamile zibuyela ekubulaleni.
Amathrekhi ahloswe nge-oblong futhi anezimpawu ze-nail njengezingoma zezinja.
Izimpungushe zaseCape ngokuvamile azibangeli umonakalo omkhulu wamasheya. Sebenzisa ucingo lwama-jackal (ucingo lwama-mesh olungaba ngu-1,2 m phezulu nokuvuleka kwama-74 mm) noma ucingo lwamagesi, ukukhwabanisa kwezilwane ebusuku, umsindo, ukukhanya nokukhanyisa okwephunga, abelusi kanye nezilwane eziqapha kungasiza bonke ukuvimbela ukulahlekelwa Ukusetshenziswa kwezigxobo zomgodla wezinyosi kutholakale ukuthi kuyindlela elula kakhulu yokulungisa izimpungushe zaseKapa.